Ikhabethe elithokomele eLakefront e-Delaronde Lake - Sleeps 7 - I-Airbnb
Ikhabethe elithokomele eLakefront e-Delaronde Lake - Sleeps 7
Big River, Saskatchewan, i-Canada
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Kyra
U-Kyra Ungumbungazi ovelele
Yenza izinkumbulo ezithile kule ndawo eyingqayizivele nelungele umndeni. Le ndlu yomndeni yesizini yonke itholakala echibini laseDelaronde, imizuzu kude neBig River, Sk. Amakamelo okulala angu-7, anamakamelo okulala angu-3, amagumbi okugeza amabili agcwele kanye nendawo ephezulu. Umgodi womlilo ongaphandle, indawo yokudlela engaphandle, indawo ezungezile enokubukwa okungu-360 ukuze uphumule ngalezo zinsuku ezinelanga. Iziko elivuthayo izinkuni kanye nokunethezeka nge-movie loft yalezo zinsuku zemvula. Qedela ngokuqaliswa kwesikebhe kanye nolwandle lomphakathi. Jabulela ucezu lwepharadesi e-Stoney Lodge!
Jabulela indawo ezungezile enokubukwa okungu-360, indawo ephakeme ethule lapho ungabuka khona amamuvi futhi ubuke echibini, umqondo ovulekile ophilayo onophahla oluvalekile kanye nezimpawu zamalogi, namafasitela amakhulu phezu kwechibi laseDelaronde. Bheka ikhabethe @stoneylodgecabin ku-Instagram.
I-South Stoney inobhishi lomphakathi ngezansi komgwaqo, ibanga lokuhamba, uma ufuna isihlabathi phakathi kwezinzwane zakho. Kukhona ukwethulwa kwesikebhe ngaphesheya kwe-marina ongayisebenzisa. Itholakala khona kanye echibini, ungafinyelela kuyo ngesikebhe, i-kayak, ibhodi lokugwedla, ukushushuluza eqhweni, ngemoto eqhweni. Uyisho. Bheka ibhuku lethu lomhlahlandlela ukuze uthole zonke izinto okufanele zenziwe endaweni.
Sise-Saskatoon, kodwa sizotholakala ngocingo nganoma yini ongase uyidinge. Sinoxhumana naye wendawo uma kukhona okuphuthumayo. Silandele ku-Instagram @stoneylodgecabin ukuze uthole amavidiyo anemininingwane eyengeziwe ngendawo yethu!
UKyra Ungumbungazi ovelele